Fanafody fanesorana lympha
Mendrika Ario ny lanjan'ny fitsipika
Androany, raha mandeha any amin'ny salon ianao mba hanitsiana tarehimarika iray , amin'ny dingana voalohany dia azo atao ny manolotra fomba fitsaboana toy ny fanasitranana ny lymph draineage. Amin'izao fotoana izao dia tsy voavaly intsony ny fahombiazany. Misy fomba maro hampiharana izany, izay mendrika manokana ny tsirairay.
Tombontsoa amin'ny fanasam-panafody lymphatique
Ny fanasitranana ny linafin'ny lymphatika dia tsy natao ho an 'ireo izay mahatsapa olana ara-pahasalamana, fa koa ho an'ny olona salama - ho fisorohana. Tsy tsiambaratelo izany fa ny lymph drainage izay mamela anao hanaisotra ny fofona, manodina ny rano mihandrona ary manandratra ny hery fiarovana. Izany dia mahatonga azy ho mora ny mandresy ny fandrosoana maro, ny adin-tsaina, ny fahaketrahana sy ny fiantraikany hafa eo amin'ny fiainantsika an-tanàn-dehibe.
Tampoka teo, tiako ny manamarika ny lafiny etetika: ny fampihetseham-pandrenesana ny fanasitranana ny selulit, ary amin'ny ankapobeny dia manja tsara ny hoditra ary manamaivana ny vatana.
Fanafody fanariana lymphatika: fampitahorana
Ny voka-dratsin'ny lympha dia mahasoa indrindra ho an'ny vatan'olombelona, ​​saingy misy ihany koa ny fanoherana. Anisan'izany ireto:
aretim-po (angina pectoris, aretim-po, aretim-po sy aretina mitaiza);
tsiranoka mahatsiravina eo amin'ny hoditra;
oncology amin'ny ambaratonga samihafa;
fitondrana vohoka (voalohany fahatelo);
vanim-potoana fampiasan'ny dokotera medikaly;
Ao amin'ny salon tsara iray, alohan'ny hanendrenao anao amin'ny fikarakarana toy izany, dia ho azon'ilay mpitsabo ny hahafantaranao ny tantaran'ny aretinao ary hanao fanadihadiana lalina mba hahalalanao raha mety hanimba anao ny fanasitranana toy izany.
Fanafody fanesorana ny lymphatique: fomba fiasa
Olona maro no liana amin'ny fomba ahoana no anaovana ny fanasitranana ny fandotoana ny lymph. Misy karazan-tsivana maromaro maromaro - ny fanafody dia atao amin'ny tanana, na amin'ny alalan'ny fitaovana manokana, na amin'ny fampiasana vakoka (ity dia ampahany amin'ny fametrahana masinina). Miankina amin'ny halaliny, ny teknôlôjia hafa dia mety ilaina - fanentanana fanolanana, fitsaboana, myostimulation na LPG. Rehefa avy nisafidy teknika iray ianao dia afaka manapa-kevitra ny amin'ny fomba mahazatra ny fanasam-panafody amin'ny lentika. Amin'ny toe-javatra isan-karazany, ny dokotera dia afaka manome fe-potoana hafa sy isa maromaro.
Ny dikan-teny fanodinana lymphie dia ny fomba fitsaboana tena tsara, izay ataon'ny mason'ny matihanina. Amin'ity tranga ity, ny fomba fiasa amin'ny mpanjifa dia tena olona manokana, satria ny manam-pahaizana dia hahatsapa tsara ny toerana misy ny adin-tsaina ary inona amin'ireo faritra ireo no mitaky be loatra.
Ny fitaovana fitsaboana amin'ny lymph dia atao amin'ny fitaovana mikarokarena manokana, izay ahafahanao mifidy singa manokana ho an'ny mpanjifa tsirairay - ny halavany sy ny hafatr'ilay pulsée ary ny faharetan'ny fiatoana. Io fomba fiasa io dia mahomby tokoa amin'ny famerenana ny tonelina hozatra, manampy amin'ny fanesorana ranon-tsakafo, manasitrana cellulite ary manala solika.
Ny fanasitranana ny vinaingitra fanasan-davenona dia ataon'ny mpitsabo matihanina miaraka amin'ny fanampiana amin'ny fantsona manokana. Zava-dehibe ny fahaiza-manara-maso - raha ny marina, ny rambony dia tsy maintsy miharihary mazava tsara eo amin'ny lalan-tsoratry ny lymph, mba ho azo antoka ny fomba fiasa ary mitondra ny tombontsoa ambony indrindra.
Amin'ny ankapobeny, ny manam-pahaizana ao amin'ny salon beauty dia manampy ny mpanjifa mba hamaritra ny fombafomba mifidy, ary manolotra ny safidy mety indrindra amin'ny fitsaboana maharitra. Ny fampiasana fantsom-panafody amin'ny solika dia manome fihenan-tsakafo mora, nefa tsara kokoa ny mampiasa izany ho dingana voalohany amin'ny fanitsiana ilay sary. Amin'ity tranga ity dia afaka manatratra ny vokatra tsara indrindra ianao ao anatin'ny fotoana fohy.
Ahoana ny fisotroana kafe maitso?
Fandaharam-panofanana amin'ny saribakoly ao an-trano
Sakafo ho an'ny legioma
Igor Obukhovsky: fampiharana ny fahaverezan'ny lanja
"Fetin'ny toaka" mahomby kokoa noho ny mahazatra?
Ahoana no hahatonga ny vavony hamboly?
Ny kibon'ny sela manala ny fatiantoka
Olaine ho an'ny fahavoazana
Fanafody ho an'ny aretim-pivalanana
Ahoana ny fomba handraisana karaoty ao anaty multifariate?
Famolavolana tranon'ny firenena iray
Inona no PR ary inona no karazana PR?
Bartholinitis - soritr'aretina
Ny taolam-paty ao an-tanimbolin'ny gilasy no sakafo mahasalama indrindra
Manamboatra volo amin'ny fomba ombre
Kitapo ho an'ny toetr'andro
Inona no lamaody amin'ny lohataonan'ny taona 2014?
Ahoana no hikarakarana yoghurt amin'ny yogourt?
Paraffin bain ho an'ny tanana
Laptop miaraka amin'ny tanana manokana
Alimony ho an'ny ankizy roa
Ady amin'ny fitondran-tena ao anatin'ny toe-draharaha